အဆိုတော်ကျားပေါက်(Big Bag Band) အဖွဲ့နဲ့ လာမယ့်သင်္ကြန်မှာ အတူတူကဲချင်လား….
4 Apr 2018 . 11:14 AM
ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကို ခုချိန်ထိရရှိနေတဲ့ အဖွဲ့တွေထဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Big Bag Band ကတော့ လာမယ့်သင်္ကြန်ရက်များမှာ WE L!T မဏ္ဍပ်မှာ ရှိနေမှာပါလို့သိရပါတယ်။ We LiT Water Festival မဏ္ဍပ်ကို ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းပေါ်မှာရှိမှာဖြစ်ပြီး Big Bag Band အပြင် တကယ့်နာမည်ကြီး DJ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ တခြားဂီတအနုပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်ကာ ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူ ဖျော်ဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီ ၁၄ နဲ့ ၁၅ ရက်များတွင် We LiT Water Festival မဏ္ဍပ်မှာ ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကို “၂၀၁၈ သင်္ကြန်အကျနေ့နဲ့ အကြတ်နေ့ ၂ရက် ကျွန်တော်တို့ Big Bag က ပြည်လမ်းက We LiT Water Festival မှာ ရှိပါမယ်။ နှစ်သစ်မှာ Big Bag နဲ့တူတူလာကဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်” လို့ အဆိုတော်ကျားပေါက်က သူရဲ့ Big Bag Band ပေ့ခ်ျမှာ ရေးသားဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုတော်ကျားပေါက်အနေနဲ့ ယခုနှစ်သင်္ကြန်မှာ We L!T Team ရဲ့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မတူညီတဲ့ဂီတအမျိုးအစား EDM ၊ Rock နဲ့ Punk တို့ကို အချိုးညီညီပေါင်းစပ်ကာ ပရိတ်သတ်တွေကို အမြင့်ဆုံး Tempo ထိရောက်အောင် ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Big Bag ရဲ့သီချင်းတွေနဲ့ ရေပန်းတွေအောက်မှာ ကဲမယ့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ We LiT Water Festival မဏ္ဍပ်ကို အရောက်လာဖို့ အဆိုတော်ကျားပေါက်က ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
We LiT Water Festival မဏ္ဍပ်ရဲ့တည်နေရာကတော့ ပြည်လမ်း ရွှေဟင်္သာ Condo အနီး RC2ထွက်ပေါက်နားမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီး လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက် ကြိုတင်ဝယ်ယူထားဖို့တော့ သတိပေးချင်ပါတယ်။
အဆိုတျောကြားပေါကျ(Big Bag Band) အဖှဲ့နဲ့ လာမယျ့သင်ျကွနျမှာ အတူတူကဲခငျြလား….
ပရိသတျတှအေားပေးမှုကို ခုခြိနျထိရရှိနတေဲ့ အဖှဲ့တှထေဲကတဈဖှဲ့ဖွဈတဲ့ Big Bag Band ကတော့ လာမယျ့သင်ျကွနျရကျမြားမှာ WE L!T မဏ်ဍပျမှာ ရှိနမှောပါလို့သိရပါတယျ။ We LiT Water Festival မဏ်ဍပျကို ရနျကုနျမွို့ပွညျလမျးပျေါမှာရှိမှာဖွဈပွီး Big Bag Band အပွငျ တကယျ့နာမညျကွီး DJ အနုပညာရှငျတှနေဲ့ တခွားဂီတအနုပညာရှငျတှလေညျးပါဝငျကာ ပရိသတျတှနေဲ့အတူတူ ဖြျောဖွပေေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဧပွီ ၁၄ နဲ့ ၁၅ ရကျမြားတှငျ We LiT Water Festival မဏ်ဍပျမှာ ပရိသတျတှနေဲ့အတူ ဖွတျသနျးသှားမှာဖွဈကွောငျးကို “၂၀၁၈ သင်ျကွနျအကနြနေဲ့ အကွတျနေ့ ၂ရကျ ကြှနျတျောတို့ Big Bag က ပွညျလမျးက We LiT Water Festival မှာ ရှိပါမယျ။ နှဈသဈမှာ Big Bag နဲ့တူတူလာကဲဖို့ ဖိတျချေါပါတယျ” လို့ အဆိုတျောကြားပေါကျက သူရဲ့ Big Bag Band ပခြေျ့မှာ ရေးသားဖိတျချေါထားတာဖွဈပါတယျ။
အဆိုတျောကြားပေါကျအနနေဲ့ ယခုနှဈသင်ျကွနျမှာ We L!T Team ရဲ့အကောငျးဆုံးတငျဆကျမှုမြားထဲမှ တဈခုဖွဈတဲ့ မတူညီတဲ့ဂီတအမြိုးအစား EDM ၊ Rock နဲ့ Punk တို့ကို အခြိုးညီညီပေါငျးစပျကာ ပရိတျသတျတှကေို အမွငျ့ဆုံး Tempo ထိရောကျအောငျ ဆှဲချေါသှားမှာဖွဈတဲ့အတှကျ Big Bag ရဲ့သီခငျြးတှနေဲ့ ရပေနျးတှအေောကျမှာ ကဲမယျ့ပရိသတျတှအေနနေဲ့ We LiT Water Festival မဏ်ဍပျကို အရောကျလာဖို့ အဆိုတျောကြားပေါကျက ဖိတျချေါထားတာဖွဈပါတယျ။
We LiT Water Festival မဏ်ဍပျရဲ့တညျနရောကတော့ ပွညျလမျး ရှဟေင်ျသာ Condo အနီး RC2ထှကျပေါကျနားမှာတညျရှိတာဖွဈပွီး လကျမှတျဈေးနှုနျးတှကေတော့ အမြိုးမြိုးရှိတဲ့အတှကျ ကွိုတငျဝယျယူထားဖို့တော့ သတိပေးခငျြပါတယျ။